Karazana antibiotika inona ny polymyxin B? - BALLYA
Posted on Janoary 24, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe polymyxin b?
Vokatry ny polymyxin
Dosis polymyxin b
Menaka polymyxin B
Vokatry ny polymyxin B
Ny tsipika fiarovana farany
Dokotera roa, Yi Fan sy Hu Weifeng ao amin'ny hopitaly Wuhan Central, indrisy fa nifanaraka Covid-19 amin'ny laharam-pahamehana klinika tamin'ny volana Janoary tamin'ity taona ity, ary farany namerina ny ainy taorian'ny niadiana tamin'ny fahafatesana nandritra ny roa volana mahery. Fa lasa mainty be ny hoditr'ireo dokotera roa ireo. Inona no antony mipetraka ao ambadiky ny tarehy maizina?
Hay ny hopitaly no nampiasaina polymyxine B ary fanafody hafa hitsaboana ireo dokotera roa ary hiorina amin'ny toe-pahasalamany. Polymyxine B manimba ny voa, ny aty ary ny taova hafa. Ho fanampin'izany, ny ankamaroan'ny marary dia hanana pigmentation amin'ny loha, tarehy, tendany ary rantsam-batana aorian'ny fampiasana tsy tapaka ny zava-mahadomelina, ka hihamaizina ny hoditra.
Ka andao hofantarina ity polymyxin b ity!
Polymyxin B dia a polypeptide antibiotika, izay fifangaroan'ny singa dimy amin'ny Polymyxin A, B, C, D, ary E.
Polymyxin dia nampiasaina hanasitranana ireo otrikaretina bakteria Gram-ratsy tamin'ny taona 1960, fa tamin'ny taona 1980 dia saika nilaozana izy io noho ny poizina sy ny fisian'ny fanafody fanoherana bakteria vaovao. Na izany aza, ny fitomboan'ny otrikaretina bakteria tsy mahazaka multidrug tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahatonga ny fampiharana indray ny polymyxin amin'ny fampiharana ara-pahasalamana.
Polymyxin dia misy fiatraikany tsara amin'ny bakteria Gram-ratsy mahatohitra multidrug, indrindra ireo aretina ateraky ny Acinetobacter baumannii mahazaka multidrug sy Pseudomonas aeruginosa (toy ny pnemonia, bakteremia, areti-mifindra amin'ny fivarotan-tena, aretina hafa.).
Antibiotika Polypeptide, kilasin'ny antibiotika misy toetra mampiavaka ny polypeptides, ao anatin'izany ny polymyxins (polymyxin B, polymyxin E), bacitracin (bacitracin, gramicidin) ary antibiotika glycopeptide (vancomycin, norvancomycin sy teicoplanin).
Ny molekiola ao amin'ny vancomycine, norvancomycin ary teicoplanin dia samy misy firafitry ny rojo sy peptide, izay antibiotika glycopeptide; misy karazana polymyxins sy molekiola bacitracin sasany koa dia misy firafitra peptide, an'ny antibiotika polypeptide; ny roa dia antsoina hoe antibiotika polypeptide.
Ny antibiotika polypeptide dia misy itovizany: ny fihanaky ny bakteria tery, ny vokatry ny bakteria mahery, ary ny nephrotoxicity isan-karazany. Izy ireo dia mety indrindra amin'ny areti-mifindra mahery vaika ateraky ny bakteria mora tohina amin'ny fanafody maro.
Polymyxin B sy E dia ampiasaina amin'ny tanjona fanafody. Polymyxin B dia tsy mandaitra afa-tsy amin'ny bakteria Gram-ratsy toa ny Aerobacter, Influenzae, Escherichia coli, Shigella ary Pseudomonas aeruginosa. Ny vokatry ny bakteria dia mahery noho ny polymyxin E.
Polymyxine B tototry ny tsindrona intramuscular tsara, saingy ambany ny fatran'ny rà, ary ny 60% -n'ny fatra dia esorina amin'ny urine. Amin'ny lafiny klinika, izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny aretin'ny ratra, lalan-dra, maso, sofina, aretin-tratra ary ny faritra hafa ateraky ny Pseudomonas aeruginosa ary pseudomonas hafa, ary koa sepsis sy peritonitis.
Polymyxin dia tolo-kevitra avy amin'ny sehatry ny kolontsaina polymyxin, izay an'ny antibiotika peptide fototra. Anisan'izany ny A, B, C, D, E, K, M, P, sns.
Polymyxin B sy polymyxin E (fantatra koa amin'ny hoe antiseptic, colistin, ary colistin) dia ampiasaina amin'ny klinika satria ambany ny poizina.
Polymyxin B sulfate dia akora fotsy tsy misy fotony na milky fotsy, mora levona anaty rano sy masira. Polymyxin E sulfate dia vovoka kristaly fotsy, mora levona anaty rano. Misy koa polyfonxin E sodium methane sulfonate, izay manana solubility avo amin'ny rano ary mety amin'ny tsindrona intramuscular.
Afa-tsy ny Proteus, dia misy fiatraikany amin'ny bakteria saika amin'ny bacilli-gram ratsy rehetra, ao anatin'izany Escherichia coli, Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Haemophilus influenzae, Shigella, Pertussis Bacillus, Cholera, ary hetsika fanoherana ny bakteria manohitra an'i Clostridium sy ireo Bacteroides sasany.
Tsy misy fitrohana aorian'ny fitantanana am-bava, fa ny fitohana haingana aorian'ny tsindrona intramuscular. Ho an'ny doka tokana 50 mg intramuscularly, adiny 2 hahatratra ny tampon'isa, ary ny haavon'ny plasma haavo dia 1-8 mg / L, fa ny fahasamihafana misy eo amin'ny tsirairay dia lehibe. Tsy miparitaka be amin'ny vatana izy io, saingy azo zaraina amin'ny aty, voa, havokavoka, fo, ati-doha na hozatra.
Noho ny lanjan'ny molekiola lehibe dia sarotra ny miditra amin'ny sakana amin'ny tsiranoka-cerebrospinal mankany amin'ny tsiranoka cerebrospinal na tsiran'ny vatana. Ny antsasaky ny plasma dia 6 ora. Aorian'ny tsindrona dia avoakan'ny mony izy io, saingy ny kely fotsiny dia mivoaka ao anatin'ny 12 ora, ary ny haavon'ny tsiranoka farany mety hahatratra 20-200μg / ml aorian'izay. Ny famoahana zava-mahadomelina dia nitohy tao anatin'ny 1 ka hatramin'ny 3 andro taorian'ny nijanonan'ny zava-mahadomelina.
Amin'ny lafiny klinika, izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny aretin'ny ratra, lalan-dra, maso, sofina, aretin-tratra ary faritra hafa ateraky ny Pseudomonas aeruginosa sy pseudomonas hafa. Azo ampiasaina amin'ny sepsis sy peritonitis koa izy io.
Ny spectrum antibacterial an'ny polymyxins dia mitovy amin'ny ankapobeny. Izy io dia misy fiantraikany mahery amin'ny bakteria amin'ny bacilli ratsy-ratsy rehetra. Izy io dia mandaitra indrindra amin'ny Pseudomonas aeruginosa, afa-tsy ny Proteus, izay tsy mora tohina. Ny hafa toy ny cocci ratsy, bakteria tsara, holatra, rickettsiae ary viriosy dia tsy mora tohina amin'izany.
Ny antibiotika toy izany dia misy fiasa an-kalamanjana ary misy vondrona amino maimaimpoana miiba, izay afaka mifatotra amin'ny fôfôsatina voadidy ratsy ao amin'ny phosfolipidan'ny fonosana sela bakteria gram-negatif, izay manitatra ny faritry ny fonon'ny sela bakteria ary mampitombo ny fahitana. Ny famoahana ny nucleotides sy ireo singa hafa dia miteraka fahafatesan'ny bakteria.
Polymyxin dia mandaitra amin'ny bakteria na amin'ny dingana fiterahana na amin'ny dingana mijanona. Ny bakteria dia mazàna tsy mora mamolavola fanoherana an'ity kilasin'ny zava-mahadomelina ity. Raha vantany vao miseho izany dia hisy ny fanoherana tanteraka eo anelanelan'ny kilasin'ny zava-mahadomelina ity.
Ny antibiotika toy izany dia ampiasaina amin'ny aretina isan-karazany ateraky ny bacilli Gram-negatif, indrindra ny Pseudomonas aeruginosa sy Escherichia coli.
Ho an'ny alika sy saka, polymyxin B dia azo ampiasaina amin'ny klinika amin'ny fitsaboana ny taovam-pisefoana, ny tavy malemy, ny trondro biliary ary ny sepsis ateraky ny bakteria mora tohina. Polymyxin E dia azo ampiasaina amin'ny aretina amin'ny ratra, lalan-dra, maso, sofina ary aretin-tratra vokatry ny Pseudomonas aeruginosa sy pseudomonas hafa, ary koa sepsis sy peritonitis.
3. Dosis polymyxin b
Ny lehibe sy ny ankizy: 1.5 ～ 2.5 mg / kg isan'andro (matetika tsy mihoatra ny 2.5 mg / kg isan'andro), indray mandeha isaky ny 12 ora. Atsofohy ny polymyxin B 50 mg, afangaro amin'ny tsindrona glucose 500% 5 ml.
Fanindronana intramuskular: olon-dehibe sy ankizy, 2.5-3 mg / kg isan'andro, indray mandeha isaky ny 6-8 ora.
4. Menaka polymyxin B
Ny menaka polymyxin B dia antibiotika peptide, antibiotika misy karazany maro, ary misy fiantraikany tsara amin'ny bakteria amin'ny ankamaroan'ny bakteria. Izy io dia menaka fotsy mavo maivana, izay ampiasaina indrindra hisorohana ny otrikaretina bakteria amin'ny ratra amin'ny hoditra toy ny fahatapahan'ny hoditra, ny fanosihosena, ny fandoroana ary ny fanidiana aorian'ny fandidiana, ary afaka manamaivana ny fanaintainana eo an-toerana, saingy tsy mety amin'ny maso izany.
Natao ho an'ny fampiasana ivelany, ampiharina amin'ny faritra maratra 2-4 isan'andro, ary ny fitsaboana dia 5 andro. Aorian'ny fampiasana azy dia mety hitranga ny fiatraikany ratsy toy ny allergy, fahatsapana may, mena ary fivontosana. Satria zara raha voadona ny fanafody aorian'ny fametahana amin'ny hoditra eo an-toerana dia matetika tsy mifanerasera amin'ny fanafody hafa izy io.
Vokatry ny polymyxin-B-effets
A. Toetran'ny voa
Ny tranga lehibe indrindra. Rehefa misy nephrotoxicity dia tsy ilaina ny manitsy ny fatra polymyxin B, satria ny ankamaroan'ny marary dia afaka mamerina tsikelikely ny fiasan'ny voa aorian'ny fijanonan'ny zava-mahadomelina.
Tsy dia fahita firy noho ny nephrotoxicity. Izy io dia miseho indrindra amin'ny fanina sy ny ataxia, ny fikolokoloana ny tarehy, ny fahamamoana, ny paresthesia peripheral, ny fanaintainan'ny tratra; ny fitantanana intrathecal dia afaka mampiseho fahasosorana meningeal, toy ny tazo, aretin'andoha, hatoka hatoka, isan'ny sela ary proteinina ao anaty tsiranoka cerebrospinal avo; ny fampiasana miaraka amin'ny fanafody neurotoxic dia mety hitarika mora foana amin'ny dispnea, hypoxemia, ary apnea.
Ny tranga pigmentation nateraky ny fampiharana intravenous polymyxin B dia 8% ka hatramin'ny 15%. Ny fandinihana iray dia nahatsikaritra fa manodidina ny 15% ny marary nanomboka niova ny lokon'ny hoditra tamin'ny andro fahatelo taorian'ny fampiharana polymyxin B, izay fahita amin'ny tarehy sy ny hatoka.
Ny pigmentation amin'ny hoditra vokatry ny polymyxin B dia azo ovaina, ary ny ankamaroan'ny marary dia afaka miverina tsikelikely aorian'ny fijanonany ireo fanafody. Ny pigmentation ny zaza vao teraka sy ny zaza dia mety hanjavona tanteraka aorian'ny fampiatoana ny zava-mahadomelina. Ny pigmentation ny marary olon-dehibe sasany dia azo ahena tsikelikely. Raha voafehy ny aretina, ny fampijanonana ny zava-mahadomelina ara-potoana na ny fikarohana fanafody hafa dia hanampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny lokon'ny hoditra. Ho an'ny marary vitsivitsy misy pigmentation amin'ny hoditra tsy azo ovaina, azo atao ny manafotsy hoditra ary ny fitsaboana amin'ny laser.
Ny fanehoan-kevitra ratsy hafa izay voalaza fa ny fitomboan'ny eosinofilia amin'ny rà, ny tsindrona intramuskular maharary (mafy), ny tazo, ny urticaria, ny phlebitis, ny fivalanana ary ny lalan-drivotra vokatry ny fifohana rivotra.
Ireo marary manana tantaram-pitsaboana ny polymyxins dia tsy tokony hampiasa polymyxin B.
Ny marary manana fihenan'ny voa voa dia tokony hampihena ny fatra. Polymyxine B afaka mamokatra myasthenia sy ny depression depression, ka tokony harahi-maso ny marary mandritra ny fitsaboana; ireo marary manana myasthenia gravis sy ireo marary nampiasa blockeur neuromuscular, fanatoranana ankapobeny, polymyxins hafa na fanafody aminoglycoside tokony hitandrina indrindra.
Ireo marary izay nampiasa zava-mahadomelina misy poizina dia tokony hampiasa izany am-pitandremana.
Tsy tokony ampiarahina amin'ny relant hozatra ary antibiotika aminoglycoside, raha tsy izany dia mety hiteraka fahalemen'ny hozatra sy apnea.
Ho an'ny alika sy saka, ny polymyxin B am-bava dia mety hiteraka fahasosorana amin'ny tsinay, ary ny tsindrona intravenous na intramuscular dia mety miteraka soritr'aretina manaitra. Ampiasao am-pitandremana.
Polymyxin E dia mety miteraka soritr'aretina toy ny fidorohana zava-mahadomelina, fanaintainan'ny toerana fampidirana intramuskular, nephrotoxicity, hematuria, proteinuria ary soritr'aretina hafa.
4. Ny tsipika fiarovana farany
Tamin'ny 19 Novambra, nanambara ny mpikaroka avy amin'ny oniversite maro any Shina, Royaume-Uni ary Etazonia ao amin'ny diary "The Lancet · Areti-mifindra" fa nahita karazana fanoherana vaovao mifandraika amin'ny iray amin'ireo andalana farany fiarovana: Polymyxin- ary io fanoherana zava-mahadomelina io dia mbola misy amin'ny biby hena sy ny olombelona, ​​angamba noho ny fampiasana fambolena zava-mahadomelina. Ity fanoherana ity dia azo afindra eo anelanelan'ny bakteria ary mety hiparitaka amin'ny firenena maro.
Tsy zava-mahadomelina vaovao amintsika io, izay hita tamin'ny 1959; fa amin'ny ankabeazan'ny fotoana nanomboka tamin'io, io zava-mahadomelina io dia nijanona teo ambonin'ny talantalana tao anaty haizina ary zara raha ampiasaina satria mety hiteraka poizina voa izany. Izany dia satria tsy be mpampiasa fa ny bakteria dia tsy nampitombo ny fanoherana ny zava-mahadomelina. Noho izany, ity fanafody ity dia nahomby hatrany.
Vokatr'izany dia nivadika harena be io fanaovana tsirambina io - izany fotoana izany dia nanomboka niely eran'izao tontolo izao ny antony fanoherana zava-mahadomelina maro (NDM, OXA, KPC) taona vitsivitsy lasa izay. Ireo antony ireo dia mahatonga ny bakteria tsy ho azon'ny vondrona fanafody antsoina hoe karbapenem. Talohan'izay, ny karbapenem dia noheverina ho laharana farany amin'ny fiarovana amin'ny bakteria: izy ireo no andiany farany izay matetika ampiasaina ary afaka miady amin'ny areti-mifindra sarotra. Matetika ny aretina toy izany dia vokatry ny E. coli, Klebsiella, Acinetobacter baumannii ary ireo olona hafa tsinay. Raha vantany vao mahazato zava-mahadomelina karbapenem ireo bakteria ireo (matetika izy ireo dia antsoina hoe "Enterobacteriaceae mahatohitra" karbapenem "(CRE)), ny polymyxin dia iray amin'ireo safidintsika sisa tavela, ary mampitombo ny fampiasana polymyxin io.
Misy zavatra hafa momba ny polymyxin izay toa tsy mifandray amin'ny olana hafa ny olona: satria fanafody taloha io dia mora vidy. Satria mora izy io dia ampiasaina hanampiana ny sakafom-biby hahatratra ny vokatra noresahiko teo aloha: hampitombo ny biby haingana sy hiarovana azy ireo amin'ny fiantraikan'ny fambolena mafy.
Mazava ho azy fa izao no fomba fampiasana ny zava-mahadomelina any Shina - fa tsy any Shina ihany. Sina dia iray amin'ireo firenena manana fambolena polymyxin lehibe indrindra eto an-tany. Amin'ny lafiny lehibe, entin'i Shina, amin'ny faran'ny 2015, ny fangatahana fambolena eto an-tany ho an'ny polymyxin dia antenaina hahatratra 11,942 taonina isan-taona (mitondra fidiram-bola mitentina 229 tapitrisa dolara amerikana).
Amin'ny 2021 dia antenaina hitombo hatramin'ny 16,500 taonina izy, miaraka amin'ny 4.75% amin'ny fisondrotana isan-taona. Ny iray amin'ireo mpanamboatra polymyxin veterinera folo lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia any India, ny iray any Danemarka, ary ny valo kosa any Chine. Azia (ao anatin'izany i Sina) dia mitentina 73.1% amin'ny famokarana polymyxin, izay 28.7% dia aondrana any amin'ny faritra hafa, anisan'izany i Eropa. Noho izany, ny fanoherana polymyxin dia mety manomboka manomboka miparitaka amin'ny biby ka hatramin'ny olombelona tsy misy fampandrenesana.
Polymyxine b an'ny antibiotika peptide. Nilaozana tamin'ny ankapobeny taona maro lasa izay noho ny nephrotoxicity azy, saingy tato anatin'ny taona vitsivitsy dia niseho teo amin'ny latabatra fivarotam-panafody izy noho ny fanamafisana ny fanoherana ny bakteria ny antibiotika.
Polymyxin dia misy fiatraikany tsara amin'ny bakteria sasany, fa ny fihanaky ny polymyxin amin'ny sakafom-biby sy ny fanafody biby dia mandrahona ny vokany mahery koa.
BALLYA manome a ballya-polymyxin-b-test hilaza aminao raha misy polymyxine residues amin'ny sakafo sy sakafo.
MedlinePlus: Polymyxin B sy Trimethoprim Ophthalmic
Mott ankizy: polymyxin B sy opethalmika trimethoprim